Ma jiri doono Linux 4.21, laakiin waxaa loo bixin doonaa Linux 5.0 | Laga soo bilaabo Linux
La xiga Linux waxay noqon doontaa wax caadi ah, wax weyna ama leh isbadalo layaableh. Waxay lahaan doontaa 50% koodhka loogu talagalay kontoroolayaasha, taas oo ah waxa ay inta badan ku mashquulsan tahay, iyadoo 10% loo qoondeeyay naqshadaha, iyo 20% la wadaago inta udhaxeysa dukumiintiyada, shabakadaha, nidaamyada faylasha, cusbooneysiinta feylasha madaxa ama madaxyada, iyo koodhka dhabta ah sida. Sidaa darteed, wax walbaa waa wax caadi ah, oo leh tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah sidii ay u socdeen illaa hadda.
Isbedelka kaliya ee xusida mudan waa nambaro, maadaama Linux 4.21 uusan imaan doonin Linux 4.20 ka dib. Horay ayuu usheegay dhowr bilood kahor, hadana waa la xaqiijiyay, nooca cusub ee 2019 waxaa loogu yeeri doonaa Linux 5.0. Hadda Linux 5.0 RC1 ayaa la soo saaray, taas oo haddii aan ku sii wado tirooyinkii hore ay ahaato RC1 laga bilaabo 4.21 sidaan idhi. Sidaasna isagu isagu wuu xaqiijiyay Linus Torvalds oo ka tirsan LKML.Aan dhicin qadarka milyan oo shey oo ku jira Git sida ka muuqata, gaadhaya lambar wareegsan oo ka faa'iideysanaya dhacdadaas si loo beddelo tirooyinka. Xaaladdan oo kale sidaas looma samayn, Linus wuxuu si fudud uga kaftamay fara badan la'aanta jidhkiisa si loo tiriyo wixii ka dambeeya 20. ah 4.21 ». Sida ay yiraahdaan: sanad cusub, nolol cusub. Xaaladdan oo kale, sanad cusub iyo nooc cusub.
Baloogyada qaarkood, sida aad u arki karto haddii aad ka raadiso Google, waxay u qaateen in nooca 4.21 uu jiri doono, isbadalkuna kuma dhici doono sidii lafilaayay. Laakiin sidaas ma ahayn, tirooyinka cusub ee 5.x-ka ah waxay imaanaysaa markii la filayay. Marka adeegsadayaashu waa inay la qabsadaan inay ugu yeeraan sidan oo kale wixii hadda ka dambeeya oo ay uga tagaan nambarka afraad, taas oo hadda tahay wax la soo dhaafay ... Haddii aad rabto inaad akhrido qoraalka buuxa, waad halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ma jiri doono Linux 4.21, laakiin waxaa loo bixin doonaa Linux 5.0
suunka oscar dijo
Abra? Ka taxaddar higaada higaada.
Jawaab Oscar Correa
Nvidia Waxay Soo Bandhigtay GeForce RTX 2060 iyo Taageerada FreeSync